Warshadda Silsiladaha Gacanta ee Shiinaha ee PVC & Warshadaha iyo soosaarayaasha | SJJ
Silsiladaha gacmaha ee PVC ee jilicsan ayaa ku habboon dadka waaweyn ama carruurta dhammaan noocyada kala duwan. Silsiladaha gacanta ee jilicsan ee PVC waxaa lagu sameeyaa walxo PVC oo jilicsan oo leh caaryayaal shubista dhinta. Maaddadu waa mid jilicsan, dabacsan, waarta, iyo deegaan. Cabbirka guud waa 220 mm dadka waaweyn ama 190 mm carruurta, halka cabbirrada la habeeyay ay yihiin ...
Silsiladaha gacmaha ee PVC ee jilicsan ayaa ku habboon dadka waaweyn ama carruurta dhammaan noocyada kala duwan. Silsiladaha gacanta ee jilicsan ee PVC waxaa lagu sameeyaa walxo PVC oo jilicsan oo leh caaryayaal shubista dhinta. Maaddadu waa mid jilicsan, dabacsan, waarta, iyo deegaan. Cabbirka guud waa 220 mm dadka waaweyn ama 190 mm carruurta, halka cabbirrada la habeeyay la heli karo iyadoo la soo saarayo qaabab cusub oo kharash yar ah. Noocyada nooc kasta oo ka mid ah qaababka jilicsan ee loo yaqaan 'PVC Wristbands' sida silsiladaha, jijimooyinka, silsiladaha silsiladda, gacan -ku -dhejinta dharbaaxada, saacadaha iyo shaqooyinka kale ee leh qurxinta kala duwan ayaa caan ka ah adduunka oo dhan. Astaamaha la habeeyay waa la xardhay, waa la dejiyay, midab baa la buuxiyay, daabacan ama laser ayaa lagu xardhay. Saamaynta 2D iyo 3D oo leh qaybo midabbo leh ayaa aad u fiican si ay u muujiyaan darajooyinka astaantaada, oo aad naqshadahaaga ka dhigto kuwo nool oo muuqda. Ma jiro MOQ xaddidan, waqti wax -soo -saar gaaban, nabadgelyo tayo sare leh iyo adeeg wanaagsan ayaa ah faa'idada aan kuu leenahay inaan wax badan kaa caawino. Gacan -gacmeedyadeenna jilicsan ee PVC iyo jijimooyin leh astaamo kuu gaar ah iyo isku -darka midabyo kala duwan ayaa dabooli doona dalabkaaga dadka waaweyn ama carruurta gacmaha -kabka iyo suuqyada jijimadaha ee fidsan.
Ujeeddooyin: Dhimasho 2D ama 3D
Midabada: Midabka asalka ahi wuxuu la mid noqon karaa midabka PMS
Dhammaystirka: Logos waa la daabici karaa, waa la xardhi karaa, waa la dejin karaa midabyo la'aan, waxaa lagu xardhi karaa midab la buuxiyey, laser ayaa ku xardhan oo sidaas maya
Ikhtiyaarrada Lifaaqa Caadiga ah: MAYA wax ku lifaaqan dhabarka ama gogosha birta ee kooxaha dharbaaxada
Xirxirida: 1pc/polybag, ama sida ku cad codsiga macmiilka
MOQ: Ma jiro MOQ xaddidan, tiro badan, qiimo ka fiican
Hore: Xirmooyinka Sawirka PVC ee jilicsan
Xiga: Qaboojiyaha Cable PVC ee jilicsan
Maaskarado Hurdo oo la habeeyay
Qadaadiic Glitter Liquid
Keychain Silicone Coin